Subash – Nepaliko Aawaj
अभिभावक ले नै बाटो बिराए पछि के होला ?
यो समाज पनि कस्तो अचम्मको छ । युवती देखे पछि मानिसले आफ्नो कर्तव्य अनि घरबार बिर्सन्छ , आफ्नो परिवार बिर्सन्छ, अनि भित्र्याउछ अर्कि श्रीमती । यहि परिवेश को सेरोफेरोमा कथा बुनिएको सर्ट मुवि रिलिज गरिएको छ सेक्सी हसबेन्ड । एन.एच.एस.को प्रस्तुति मा शंकर अधिकारी घायलको लेखन र निर्देशन , सुरेस गुरुङको छायांकन , युबराज खत्री को सम्पादन रहेको सेक्सी हसबेन्डमा युबराज खत्री, शान्ती इज...
मंगलबार, फाल्गुण ०४, २०७२
भ्यालेन्टाइन डे मा नित्याशिबाको दिल चोरी लैजाउ
भ्यालेन्टाइनको अबसर पारेर एक गित तयार गरिएको छ, दिल चोरी लैजाउ ए प्रीयतम नित्याशिबा र शम्भु रैका को आवाज शंकर अधिकारी घायलको गित/ संगीत रहेको उक्त गितलाइ अलि फरक ढ्ङको म्युजिक भिडियो बनाइएको छ विशाल रेग्मी र दिक्छा रैला को अभिनय रहेको उक्त भिडियो लाई रामेस्वर हुमागाइ ले खिचेका हुन सुरेस गुरुङको नृत्य ,युबराज खत्री को समपादन र शंकर अधिकारी घायलको निर्देशन रहेको छ एन.एच.एस.मिडि...
बिहिबार, माघ २८, २०७२
मायामा पागल बने पछि के हुन्छ ?
NHS media प्रस्तुत गर्दछ नेपाली कथानक चलचित्र म्याड गर्ल अर्थात पागल केटि | जस्लाइ माया गर्यो अनि बिश्वास गर्यो उसैले साथ छोडे पछि आफ्नो सर्बस्व हरेर अरुकै हात थामे पछि एक नारी मन कसरी बिचलित हुन्छ र उ कसरी मायामा पागल बन्दै आफै लाई सिध्याउन सक्छे यहि सेरोफेरोमा मयाड गर्ल अर्थात पागल केटि को कथा घुमेको छ रामेस्वर हुमागाइको छायांकन युबराज खत्री को सम्पादन र शंकर अधिकारी घाय...
जयल इन्टरटेन्मेन्ट को नयाँ भिडियो सार्वजनिक
दुबई, लामो समय देखि युएईमा म्युजिक भिडियो निर्देशन, छायांकन को काम गर्दै आएको जयल इन्टरटेन्मेन्ट ले फेरी अर्को भिडियो सामाजिक संजाल र युतुबमा सार्वजनिक गरेको छ l नेपालको इमेज च्यानल, च्यानल नेपाल, टिवी टुडे लगायतका विभिन्न टिवीहरुमा बिगत दुइ हप्ता देखि बज्दै आइरहेको छ भने अब सो गीत युतुबमा पनि सार्वजनिक गरेको भिडियोका नायक ज्ञान लामा ले जानकारी दिनु भएको छ l भिडियोमा युएईको रम...
काठमाडौं-पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको गए राति १२:५० बजे निधन भएको छ। महाराजगन्जस्थित कोइरालाको निवासमै उनको निधन भएको कोइराला निकट पारिवारिक श्रोतले जानकारी दियो। चेन्जिङ वेदरले ब्रोङ्काइटिसमा निमोनिया विकास भएपछि उनको स्वासप्रस्वासजन्य समस्या (टाइप टु रेस्पिरेटोरी फेलियर) का कारण मृत्यु भएको कोइरालाका निजि चिकित्सक डा कर...
दोहा । नेपाल मगर संघ शाखा कतारको मातहतमा रहेको कला तथा सांस्कृतिक बिभाग संयोजक रबि पुलामी मगरलाई संस्थाले बिदाई तथा सम्मान गरेको छ । आफ्नो कतारको बसाइँलाई बिट मार्दै नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका मगरलाई शुक्रबार ओर्कामा आयोजित एक कार्यक्रममा बिदाई गरिएको हो । कतारमा रहेर क्रियाशिल रुपमा संस्थामा गरेको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै उनलाई खादा तथा दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरियो । संस्थ...
२४ माघ, काठमाडौं । उत्तर कोरियाले लामो दुरीको रकेट परीक्षण गरेको छ । यो प्रतिवन्धित मिसाइल प्रविधिको उल्लंघन भएको उसका आलोचकहरुले बताएका छन् । उत्तर पश्चिमी बेसबाट रकेट लन्च गरेको दक्षिण कोरियाले दाबी गरेको छ भने जापानले रकेट दक्षिणी ओकिनावा द्वीपको माथिबाट गएको बताएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार प्योङयाङले यस्तो परमाणु हतियारको विकास गरिरहेको छ, जसको पहुँच अमेरिकासम्म होस् । जापा...
२४ माघ, काठमाडौं । भारत उत्तर प्रदेश सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि अण्डरवल्ड डन दाउद इब्राहिमलाई भेटेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री आजम खानले पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा मोदीले दाउदलाई भेटेको दाबी गरेका हुन् । आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएरहने मन्त्री खानले भने, प्रधानमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेर अतानक पाकिस्तानको भ्रमण गरे । उनले त्य...
२५ माघ काठमाडौं । ताइवानमा शनिबार आएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ । यो संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । ताइनान शहरमा १७ तले घर भत्कदा त्यस भित्र अझै १ सय भन्दा धेरै मानिस फसेको आशंका गरिएको छ । उनीहरुलाई निकाल्ने प्रयास जारी रहेको छ । ताइवानमा शनिबार ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प मापन गरिएको थियो । बीबीसीका...
काठमाडौं । व्हाइट हाउसमा वाई फाईको सिग्नल खराब हुँदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र उनको परिवार समस्यामा परेका छन् । सीबीएल न्यूजसँगका कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति ओबामाले व्हाइट हाउसमा वाई फाईको सिग्नल खराब रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार व्हाइट हाउसको ठूलो क्षेत्रमा वाई फाईको सिग्नल नै भेटिदैन्, जसलाई मिशेल ओबामाले डामाडोल भनेकी छन् । यसका कारण आफ्नो दुबै छोरी साशा र मलिया ...